Kazuyoshi Miura: 50 Jir Garoomada Wacdaro Ka Dhiga Oo Heshiis Cusub Saxeexay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kazuyoshi Miura: 50 Jir Garoomada Wacdaro Ka Dhiga Oo Heshiis Cusub Saxeexay
(11-1-2018) Cayaaryahan Kazuyoshi Miura waa ciyaartoy wacdaro ka dhiga garoomada oo 51 jir noqonaya bisha dambe, hase yeeshee, da’diisa weynaatay waxba umay dhimin hannaankiisa ciyaarood iyo hibada adkaysiga ah ee Allah siiyey.
Waxa uu toddobbaadkan qalinka ku duugay heshiis uu la galay kooxda Yokohama FC ee horyaalka heerka labaad ee waddanka Japan, waxaana ay taasi muujinaysaa in aanu wali maanka ku haynin inuu kabaha tiiriyo, taas oo ay u dheer tahay in uu leeyahay karti, awood iyo xirfad uu ku kasbanayo in kooxuhu mushahar badan ku siiyaan u ciyaaristiisa.
Heshiiskan cusub waxa uu ka dhigan yahay inuu xili ciyaareedkii 33aad kordhinayo qandaraas rikoodh jebis ah, iyadoo uu hayaankiisa ciyareed kasoo bilaabay kooxda Santos ee waddanka Brazil sannadkii 1986-kii.
“Mar kasta niyadda ayaan ka ciyaaraa, waxaanan rajaynayaa inaan ciyaartoy ahaan usii kordhi doono” Sidaas waxa yidhi Kazuyoshi Miura oo u warramay wakaaladda wararka Kyodo.
Kazuyoshi Miura waxa uu usoo ciyaaray kooxaha Genoa iyo Dinamo Zagreb ka hor intii aanu sannadkii 2005 ku biirin kooxda kubadda cagta Yokohama FC.
Kazuyoshi Miura waxa uu u ciyaaray xulka qaranka Japan oo ka hor tegay Brazil sannadkii 1992-kii
Waxa uu u dhashay waddanka Japan oo uu u ciyaaray 89 ciyaarood, kooxda uu u ciyaaro ee Yokohama na waxa uu u dhaliyey 139 gool, taas oo ka dhigtay inuu yahay ciyaartoyga lixaad ee ugu gool dhalinta badan horyaalka heerka labaad ee Japan.
Xaqiiqooyinka iyo dhacdooyinka cimri-dhererka ciyaareed ee Miura
Markii ay da’diisu ahayd 15 jir, Miura waxa uu ka tegay dalka Japan, waxaanu u guuray Braizl, halkaas oo sannadkii 1982-kii uu ka bilaabay riyadiisa kubadda cagta. Sannadkii 1986-kii ayuu heshiis la galay kooxda Santos oo wakhtigaas ka mid ahayd naadiyada dunida ugu wanaagsan iyadoo ay da’diisu ahayd 19 jir.
Miura waxa uu ka tegay Santos, waxaanu ku biiray Palmeiras sannadkii 1987kii, waxaana halkaas ay isku koox ka noqdeen laacibkii weynaa ee Mirandinha oo sannadkii 1987-kii noqday laacibkii ugu horreeyey ee reer Brazil ee ka ciyaara horyaalka Ingiriiska, markaas oo Newcastle United ay kusoo iibsatay £575,000.
Miura waxa uu noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan dunida sannadkaas, isagoo kaga guuleystay Zico iyo Lineker. Sidoo kalena xiddiga waddanka Japan sannadkii 1993-kii.
Isla sannadkii 1993-kii, wuxuu noqday xiddigii ugu hoorreeyey ee waddanka Japan u dhashay ee noqda xiddiga sannadka ee qaaradda Asia.
Kulankii ugu horreeyey waxa uu xulka qaranka Japan u saftay sannadkii 1990-kii, waxaanu dalkiisa usoo saaray koobkii adduunka ee sannadkii 1998-kii isagoo dhaliyey 14 gool kulamadii isreeb-reebka, hase yeeshee, nasiib darro laguma darin ciyaaryahannadii Koobka Adduunka ka qayb-galay.
Sannadkii 2000 ayuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah, iyadoo uu dalkiisa u ciyaaray 89 ciyaarood 55 goolna dhaliyey.
Qaaradda Yurub, waxa uu u ciyaaray naadiga Genoa ee ka dhisan Talyaaniga iyo Dinamo Zagreb oo Croatia ka dhisan, taas oo sannadkii 1999 uu kula guuleystay horyaalka Croatia.
Kooxda uu wakhtigan u ciyaaro ee Yokohama FC waxa uu ku biiray sannadkii 2005 iyadoo ay da’diisu tahay 38 jir, waxaana uu illaa hadda u saftay 200 iulan oo horyaalka ah.